Kheyraadka, Adeegyada, iyo Xiriirrada ka socda Dutchtown • DutchtownSTL.org
Kheyraadka Xaafada Dutchtown
DutchtownSTL.org ujeedadeedu tahay inay ku siiso macluumaadka ugu dambeeyay iyo ilaha ay heli karaan deriskeennu. Boggan waxaad ka heli kartaa wax ku saabsan adeegyada iyo waaxaha Magaalada St. Louis, oo lagu daray ilo kale oo loogu talagalay dadka ku nool kana shaqeeya Dutchtown. Raadi sida loo helo ilaha, xallinta arrimaha, la xiriir saraakiisha la doortay, iyo waxyaabo kale oo badan.
Ma u baahan tahay ilo ku qoran luqad kale?
DutchtownSTL.org hadda waxaa lagu heli karaa luuqado dhowr ah oo ay ku jiraan Isbaanish, Fiitnaam, Carabi, Nepali, iyo in ka badan! Halkan guji si aad u bilowdo turjumaadda.
Adeegyada aan Degdegga ahayn
Xaafadaha iyo Ururada Ganacsi
Saraakiisha La Doortay
Adeegyada Magaalada: Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta
The Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta (CSB) waa xarunta nadiifinta Magaalada St. Louis ee arrimaha adeegga magaalada maalin-ka-maalin ah. Markaad xaalad deg deg ah ku haysato magaalada St. Wac CSB wixii ku saabsan arrimaha soo socda oo dhan nooc kasta oo arrimo ah.
Waxaad ka wici kartaa CSB lambarka (314) 622-4800, emayl csb@stlouis-mo.gov, booqo bogga CSB, ama ku soo qor barta @stlcsb si aad u soo sheegto arrin ama aad u codsato adeeg.
Inta badan arrimaha ku saabsan adeegyada magaalada waxaa qaban kara CSB, markayna si toos ah kuu caawin karin waxay kaa caawin doonaan inaad hesho waaxda saxda ah ee aad weydiisan karto. Markaad shaki gasho, ka bilow Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta.
Ka hel macluumaad qoto dheer iyo tilmaamo ku saabsan sida loo codsado codsi ku jira annaga tilmaamaha Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta.
Ku noqo jadwalka waxyaabaha ku jira.
Arrimaha socda: Khabiiro ku takhasusay hagaajinta xaafadaha
The Khabiirka Horumarinta Xaafadaha waxay u adeegtaa sidii xiriiriyaha ka dhexeeya dadka deegaanka iyo adeegyada magaalada marka hawl aad u xoog badan loo baahan yahay. Khabiirrada Horumarinta Xaafadaha (sidoo kale loo yaqaan NISs, NSOs, ama Saraakiisha Xasilinta Xaafadda) waxay la shaqeeyaan Qeybta Dhibaatooyinka Guryaha ee Waaxda Booliska ee St.
Kuwa soo socda NISs waxaa loo qoondeeyay aagga Dutchtown sidaan u qorayo:
Qaybta 25 NIS Christian Saller
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Khubarada hagaajinta Xaafadaha.
Waaxda Booliska ee 'St. Louis Metropolitan'
Degmooyinka booliska ee Dutchtown.
The Waaxda Booliska ee 'St. Louis Metropolitan'Degmooyinka Koowaad iyo Saddexaad waxay u adeegaan aagga Dutchtown.
Wac 911, ama (314) 231-1212 wixii aan degdeg ahayn. Markaad shaki gasho, wac 911.
Haddii aad u yeeraysid inaad ka warbixiso dhibaatada taagan, fadlan hubi inaad isticmaasho cinwaanka saxda ah ee hantida dhibka leh - warbixinnada dhibku waxaa lagu dabagalaa cinwaanka, macluumaadka saxda ahna wuxuu caawiyaa NISs iyo Qeybta Dhibaatooyinka Guryaha si loo dhiso dacwado ka dhan ah milkiilaha guriga ama dadka deggan.
Waxaan ku soo uruurinay macluumaad qoto dheer oo ku saabsan yaa, xagee, iyo goorta la wacayo adeegyada booliska ee Dutchtown. Baro wax badan oo ku saabsan sida loola xiriiro booliska, degmada aad ku nooshahay iyo cidda uu yahay taliyaha xaafadaada, yaa lala xiriirayaa haddii aysan xaalad degdeg ahi dhicin, iyo inbadan.
Waaxda Dabka ee St.
U wac 911 adeeg ama 314-533-3406 wixii su'aalo guud ah. Wac khadka guud haddii aad u baahan tahay inaad dalbato qalabka dabka ka baaraya. Wax ka yar arrimaha badbaadada dabka waxaa looga warbixin karaa Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta (314) 622-4800.
Kheyraadka Bulshada ee Aan Degdegga Aheyn
Xaaladaha qaarkood ayaa laga yaabaa inaanay u yeedhin jawaabta booliska. Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah ilaha bulshada si ay ugala tashadaan xaalad aan deg-deg ahayn ama xaalad kale oo xasaasi ah.
The Barnaamijka Rabshadaha Daaweeya, ay maamusho Xiriirka Shaqada, ayaa dhowaan yimid magaalada Dutchtown. Rabshadaha daaweyntu waxay u soo dhawaataa dambiyada iyo rabshadaha qoryaha dhibaato caafimaad oo bulshada ah. Shaqaalahooda tababaran ee carqaladeeya rabshadaha ayaa raadinaya inay soo farageliyaan xaaladaha halista ah ka hor intaanay sii kala kicin. Xalinta khilaafaadka, dhexdhexaadinta, iyo adeegyada kale ee bulshada, wac 314-333-3604.
Xidhiidh Amni 24/7 Khadka Dhibaatada
La-talin wax ku ool ah 24/7 Khadka Dhibaatada
Jawaabta Caafimaadka Habdhaqanka
Khadka Tooska ah ee Hoyga
Isbahaysiga Metropolitan ee Darbi-jiifka
Buugga Hoyga Guri La'aanta
Xadgudubka Carruurta iyo Khadka Taleefanka Dayaca
Xannaanada Dhibaatada ee St.
Carruurta Ka Yar 21
Khadka Caawinta Xiriirka Dhalinyarada
Kheyraadka Isticmaalka Maandooriyaha
Maandooriyeyaasha aan la aqoon
Kheyraadka Rabshada Guryaha
NOOL: Waxyaabaha Lagu Beddeli Karo Degaanada Rabshadaha Ka Wada
Guriga Amaanka Haweenka
Xarunta Caddaaladda Qoyska
Kheyraadka kale ee Bulshada
Xarunta Dhibanaha Dembiyada
Khadka Tooska ah ee Xadgudubka Waayeelka
Khadadka Caawinta ee St. Louis Queer +
Xaafadaha iyo Ururada Ganacsi ee Dutchtown
Qaar ka mid ah ururada ka jira aagga Dutchtown ayaa u adeega inay isu keenaan dadka deegaanka, kor u qaadaan tayada nolosha aagga, iyo inay horumariyaan ganacsiyada xaafadaha.
Ururka Dariska ee Gravois Park
Ururka Dariska Marine Villa
Ururka Xaafada Mount Pleasant
Ururada kale ee Xaafadaha
Degmada Horumarinta Bulshada ee Cherokee Street
Kheyraadka Ganacsi ee Dutchtown
Booqo dutchtownstl.org/business si aad u hesho a liiska kheyraadka si gaar ah loogu talagalay ganacsiyada yaryar ee ku yaal Dutchtown iyo dhammaan Magaalada St. Louis. Waxaan helnay xiriir dowladeed oo waxtar leh bilowga ama ku shaqeynta meheraddaada. Waxaan sidoo kale soo saaraynaa anfacaya Hagayaasha socodka si aan kuu tuso siyaabo badan oo loo abuuro ganacsi.
Khayraadka Waxbarashada iyo Dhallinyarada
Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan ilaha waxbarashada ee dadka waaweyn. Waxa xusid gaar ah leh fasaladooda HiSET (GED), xiisadaha xoojinta dhaqaalaha, iyo tababbarka xirfadaha aasaasiga ah ee kombiyuutarka.
Dhanka dhalinyarada, Thomas Dunn ayaa maamula Goobta, xarun lagu tago oo ku taal Marquette Park Recreation Center. Dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 21 waxay iman karaan maalmaha shaqada inta u dhaxaysa 4pm iyo 7pm si ay ugu nastaan ​​ciyaaraha, isticmaalka internetka, iyo buugaagta. Goobtu waxay kaloo bixisaa cuntooyin iyo cunto fudud oo caafimaad leh, iyo sidoo kale weel iyo qalajiye.
Aagga Greater Dutchtown waxaa u adeega Dugsiyada Dadweynaha ee St.. Ardayda dugsiga hoose waxay dhigan karaan dugsiyada xaafadaha sida Dugsiga Hoose Meramec, Akadamiyada Akhriska iyo Qoraalka ee Froebel, Dugsiga Hoose ee Monroe, Iyo Dugsiga Hoose ee Woodward. Dugsiga Sare ee Carnahan ee Mustaqbalka sidoo kale waxay ku taal Dutchtown. Dugsiyada Dadweynaha ee St. Louis waxay kaloo bixiyaan tiro dugsiyo raad-raac ah oo loogu talagalay ardayda dugsiyada hoose, dhexe, iyo sare. Halkan ka hel macluumaadka diiwaangelinta.
Xaafaddu waxay kaloo bixisaa dugsiyo charter ah oo ay ku jiraan Confluence South City Academy, Udiyaarinta Kulliyada Eagle, Dugsiyada tacliinta sare ee Kairos, Iyo KIPP Wonder Academy.
Sido kale ku yaal Dutchtown waxaa ku yaal dugsiyo diini ah oo gaar loo leeyahay oo ay ku jiraan Dugsiga Sare ee St. Mary wiilasha, iyo St. Cecilia Academy, kaas oo ugu horayn u adeega ardayda ku hadasha Isbaanishka.
Waxaad ka heli kartaa wax ballaaran liiska saraakiisha la doortay ee u adeegaya Dutchtown iyo Koonfurta Side oo ay weheliyaan macluumaadka xiriirka oo dhameystiran iyo asalka. Hoos waxaa ku yaal xiriiriyeyaal deg deg ah.
Ward 25 Aaabaheed Shane Cohn
Hubin waaxda aad ku jirto? Raadi cinwaankaaga bogga Magaalada.
Degmada 81 Gobolka Rep. Steve Butz: u adeegida aqlabiyadda Dutchtown
Degmada 80 Mudane Peter Meredith: u adeegida qaybta waqooyi-galbeed ee Dutchtown
Degmada 78 Mudane Rep. Rasheen Aldridge: u adeegida qaybta waqooyi-bari ee Dutchtown
Raadi Wakiilkaaga Gobolka websaydhka Missouri
Aqalka Wakiilada Mareykanka & Guurtida
Xildhibaan Cori Bush
Magaalada St. Louis Qeybta Biyaha
Biilasha: (314) 622-4179
Furan biyo furan ama biyo socda: (314) 771-4880
Adeegga macaamiisha: (314) 771-2255
Magaalada St. Louis Qeybta Diidmada
Adeegga macaamiisha (CSB): (314) 622-4800
Ameren Missouri (Koronto)
Biilasha: (866) 268-3729
Khadadka korantada ee soo degay: (800) 552-7583
Adeegga macaamiisha: (800) 552-7583
Tamarta Spire (Gaaska Dabiiciga ah)
Biilasha: (800) 887-4173
Ka warbixi daadka gaaska: 911 ama (800) 887-4173
Adeegga macaamiisha: (800) 887-4173
Degmooyinka Metropolitan Bullaacad
Biilasha: (866) 281-5737
Adeegga macaamiisha: (314) 768-6260
Ma jiraan wax ka maqan tilmaamahayaga xaafadda iyo kheyraadka magaalada? Fadlan nala soo socodsii oo waxaan isku dayi doonaa inaan kaa caawino inaad hesho waxaad u baahan tahay oo aan ku darno liistadayada halkan.
DutchtownSTL.org Kheyraadka Xaafada Dutchtown